माइक्रोसफ्ट एंड्रोमेडा, कम्पनी एक डिजिटल नोटबुक | ग्याजेट समाचार
भर्खर हामी आफैले बाट थाहा पाएका थियौं माईक्रोसफ्टले विन्डोज फोन अपरेटिंग प्रणाली अन्तर्गत नयाँ उत्पादनहरूको विकासलाई पछाडि छोडिदियो। अहिलेसम्म पुगेको बजार हिस्सा महत्वहीन थियो र विगतमा यसमा शर्त लगाउने कम्पनीहरूले आईओएस वा एन्ड्रोइड जस्ता प्रणालीहरूको साथमा नयाँ युगको लागि मार्ग प्रदान गर्दै थिए।
तर मोबाइल सेक्टरलाई पछाडि राखेर विन्डोज सेन्ट्रलबाट एक नयाँ उपकरणको बारेमा नयाँ समाचार आउँदछ जुन अर्को साल २०१ 2018 जस्तै देखिन सक्छ। क्षणको लागि मात्र परियोजना "Andromeda" को नाम परिचित छ र यसको आकार स्मार्टफोनको जस्तो मिल्दो हुनेछ।
अब, यो स्पष्ट पारियो कि माइक्रोसफ्टले यस माइक्रोसफ्ट माइक्रोफोन एन्ड्रोमेडासँग मोबाइल क्षमताहरू चाहँदैन Least कमसेकम कल गर्न सक्षम हुनु। यो एउटा सानो फोल्डिंग ट्याब्लेट (माइक्रोसफ्टको यस क्षेत्रमा अनुभव छ) जुन समस्या बिना पकेटमा बोक्न सकिन्छ।
साथै, यो नयाँ टीम विन्डोज १० अन्तर्गत काम गर्दछ। तर के बढि निश्चित छ जुन यसको अपरेशनमा आधारित हुन्छ OneNote को रूपमा गोलको रूपमा उत्पादनहरू, अनुप्रयोग जुन Evernote जस्तै शक्तिशाली माथि खडा हुन्छ। यो पनि ज्ञात छ, विन्डोज सेन्ट्रल लीकका अनुसार आईओएस वा एन्ड्रोइड हराउने प्रतिद्वन्द्वी हुँदैनन्; माइक्रोसफ्ट एक्सप्लोर गर्न र अधिकतम कोटा सम्भव पाउनको लागि अर्को ठाउँ खोज्न चाहन्छ।
र यो यो हो कि हातले लेख्नु भनेको यस्तो चीज हो जुन धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यति धेरै प्रविधिबाट गुमाउँदछन्। र इमान्दार हुनका लागि: कम्तिमा or वा १० इन्च ट्याब्लेटमा लेख्नुहोस्, यो उस्तै अनुभव होइन जुन हामी हाम्रो DIN A5 नोटबुक लिन्छौं र हामी यसलाई कुनै पनि समय हाम्रो जेबबाट बाहिर लिन्छौं। फ्रिह्यान्ड नोट्स लिनु भनेको केहि चीज हो जुन तपाईंलाई छिटो जान अनुमति दिन्छ र यस्तो अवस्थामा जसमा धेरै प्रयोगकर्ताहरूले बढी सहज महसुस गर्छन्।
यो अझै पक्का छैन कि Microsoft ले यो नयाँ छोड्नेछ कि माईक्रोसफ्ट एन्ड्रोमेडा निकट भविष्यमा - २०१ m निकट नजिक आउँदैछ। तर यो पनि सत्य हो कि उपभोक्ता टेक्नोलोजी क्षेत्रमा हालसालै आश्चर्य र नवीनता गिरावटमा छ। के तपाईं यी सुविधाहरू भएको उत्पादनमा रुचि राख्नुहुन्छ? हामी बुझ्दछौं कि यदि हामीले योसँग गर्यौं भने यो अनुभव अझ राम्रो हुनुपर्छ ग्यालक्सी नोट and र यसको एस-पेन स्टाइलस.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » माइक्रोसफ्ट एन्ड्रोमेडा, कम्पनी एक डिजिटल नोटबुक मा काम गर्ने थियो